Ultimate Collector စီးရီးမော်ကွန်းတိုက် - Brick Fanatics
Lego အပေါ်£ 20 သိမ်းဆည်းပါ Star Wars Zavvi တွင် 75309 Republic Gunship
27 / 06 / 2022 27 / 06 / 2022 Matt Yeo 68 Views စာ0မှတ်ချက် 75309 သမ္မတနိုင်ငံ Gunship, Clone Trooper တပ်မှူး, Lego, Lego Star Wars, တင်းပုတ် Windu, သေးသေးလေး, Star Wars, Ultimate စုဆောင်းစီးရီး, အပတ်စဉ် Zavvi LEGO စျေးနှုန်းများ, Zavvi, Zavvi LEGO အရောင်းအဝယ်များ ဖတ်ပြီးသားမိ 2
အွန်လိုင်းလက်လီရောင်းချသူသည် LEGO လျှော့စျေး £20 ဖြင့် Zavvi တွင်ယခုအချိန်တွင်စုဆောင်းရမည့်ငွေစုများစွာရှိပါသည်။
Lego ချွတ် 20% Star Wars John Lewis ရှိ Millennium Falcon 75192
22 / 06 / 2022 23 / 06 / 2022 Matt Yeo 86 Views စာ0မှတ်ချက် 75192 ထောင်စုနှစ် Falcon, BB-8, ကို C-3PO, Chewbacca, ဖင်လန်, ဟန်တစ်ကိုယ်တော်, ယောဟနျသ Lewis က, John Lewis LEGO အရောင်းအ၀ယ်, Lego, Lego Star Wars, ထောင်စုနှစ် Falcon, သေးသေးလေး, Mynock, PORGS, မင်းသမီးလီယာ, rey, Star Wars, SCU, Ultimate စုဆောင်းစီးရီး ဖတ်ပြီးသားမိ 2
LEGO ၏ မယုံနိုင်လောက်အောင် 20% လျှော့စျေးကို အခွင့်ကောင်းယူရန် ယခုပဲ John Lewis ထံသွားပါ။ Star Wars ထောင်စုနှစ် ၇၅၁၉၂
အဆိုပါ Lego Star Wars သင်္ဘောဒီဇိုင်နာ Colin Cantwell ကွယ်လွန်သွားတဲ့အတွက် စကြဝဠာကြီး ဝမ်းနည်းကြေကွဲရပါတယ်။
23 / 05 / 2022 23 / 05 / 2022 David Parry 115 Views စာ0မှတ်ချက် အသေသတ်ခြင်းကိုစတား, Lego, Lego Star Wars, ကြယ်ဖျက်သင်္ဘော, လည်စည်းတိုက်လေယာဉ်, Ultimate စုဆောင်းစီးရီး, X- တောင်ပံ ဖတ်ပြီးသားမိ 1
Colin Cantwell သည် LEGO ၏ အဓိကကျသော သင်္ဘောများစွာကို ဒီဇိုင်းထုတ်ခဲ့သူဖြစ်သည်။ Star Wars စကြာဝဠာကြီး ကွယ်လွန်သွားပြီ၊
LEGO သည် မည်သည့် sets တွင်ရှိမည်ကိုဖော်ပြသည်။ Star Wars အခမ်းအနား
14 / 05 / 2022 14 / 05 / 2022 Jack Yates 349 Views စာ0မှတ်ချက် Lego, Lego Star Wars, Star Wars, star wars အခမ်းအနား, Star Wars အခမ်းအနား Anaheim 2022, SCU, Ultimate စုဆောင်းစီးရီး ဖတ်ပြီးသားမိ 2
အဆိုပါ LEGO Group ရွေးချယ်ကြောင်း အတည်ပြုခဲ့သည်။ Star Wars အစုံလိုက်ရောင်းပါမည်။ Star Wars အခမ်းအနား Anaheim,
LEGO နည်းလမ်းငါးခု Star Wars UCS အပြင်အဆင်သည် အချစ်၏နောက်ဆက်တွဲများကို ပြသနိုင်သည်။
13 / 05 / 2022 13 / 05 / 2022 David Parry 294 Views စာ3မှတ်ချက် 10227 B- တောင်ပံ Starfighter, 75053 အဆိုပါဝိညာဉ်, 75179 Kylo Ren ရဲ့ TIE တိုက်လေယာဉ်, 75188 ခုခံဗုံးကြဲလေယာဉ်, 75195 နှင်းလျှောစီး Speeder vs ပထမ ဦး ဆုံးအမိန့် Walker ကအသေးစားပျံသန်း, 75341 လု? Skywalker ၏ Landspeeder, တစ်ဦးကနယူးမျှော်လင့်ချက်, Lego, Lego Star Wars, Star Wars, Star Wars သူပုန်များ, Star Warsမျှော်လင့်ချက်အသစ်, Star Warsဖြေ, Star Wars: နောက်ဆုံး Jedi, အဆိုပါတပ်ဖွဲ့ကိုနှိုးဆျော, နောက်ဆုံး Jedi, SCU, Ultimate စုဆောင်းစီးရီး ဖတ်ပြီးသားမိ 4
မျှော်လင့်ချက်အသစ်မှ Luke ၏ X-34 Landspeeder သည် LEGO တွင်ပါဝင်လာသည်။ Star Wars Ultimate Collector Series အစီအစဥ်ကို ကျွန်ုပ်တို့ မေးသည်- “ဘာလဲ
08 / 05 / 2022 09 / 05 / 2022 Matt Yeo 156 Views စာ0မှတ်ချက် 5007403 Mandalorian Beskar Keyring, တစ်ဦးကနယူးမျှော်လင့်ချက်, ဝယ်ယူမှုနှင့်အတူလက်ဆောင်, GWP, Jedi, တောင်ကြီးမြို့, Lego, Lego GWP, Lego ဆုပေးစင်တာ, Lego Star Wars, Lego VIP, LEGO VIP အမှတ်များ, lego vip ဆုလာဘ်, Lego VIP ဆုလာဘ်များ, မေလ ၄ ရက်, Mos Eisley, Obi-wan kenobi, ဆုလာဘ်, ဆုလာဘ်, ဆုပေးစင်တာ, Star Wars, မုန်တိုင်း, SCU, Ultimate စုဆောင်းစီးရီး, VIP, VIP အဖွဲ့ဝင်များ, vip အချက်များ, vip ဆုလာဘ်, VIP ဆုများ, VIP ဆုပေးစင်တာ ဖတ်ပြီးသားမိ 1
Lego Star Wars 4th Landspeeder VIP ပရင့်များကို ယခုရရှိနိုင်ပါပြီ။
06 / 05 / 2022 06 / 05 / 2022 Chris Wharfe 195 Views စာ 1 မှတ်ချက် 75341 လု? Skywalker ၏ Landspeeder, ဘင် Kenobi, Lego, Lego Star Wars, Lego VIP, LEGO VIP အမှတ်များ, မေလ ၄ ရက်, Star Wars, SCU, Ultimate စုဆောင်းစီးရီး, VIP ဆုပေးစင်တာ ဖတ်ပြီးသားမိ 2
ကတိပေးထားတဲ့ LEGO အသစ်နှစ်ခုလုံး Star Wars 75341 Luke Skywalker ၏ Landspeeder ပရင့်များကို VIP ဆုများ တွင် ယခုရရှိနိုင်ပါပြီ။
06 / 05 / 2022 10 / 05 / 2022 Oli Coates 208 Views စာ0မှတ်ချက် 75192 ထောင်စုနှစ် Falcon, ၇၅၃၀၈ R75308-D2, 75309 သမ္မတနိုင်ငံ Gunship, Lego, lego အပေးအယူ, LEGO May ၏4ကြိမ်မြောက်သဘောတူညီချက်များ, Lego Star Wars, မေလ ၄ ရက်, စတုတ်ထမေ, Star Wars, Star Wars နေ့, Ultimate စုဆောင်းစီးရီး, Zavvi, Zavvi LEGO အရောင်းအဝယ်များ, Zavvi May4ခုမြောက် သဘောတူညီချက်များ ဖတ်ပြီးသားမိ 4